Ny serivisy rehetra
Ny toerana misy anao, ny famonoana olona, ​​ary ny famaritana avy amin'ny albucius. Ranomasina miadana any amin'ny ranomasina, quas meliore ocurreret eam on.
Serivisy 1Serivisy 2Serivisy 3Serivisy 4
Fantaro ny tombontsoan'ny fikambanana matihanina!
Momba ny Fikambanana Iraisam-pirenena
Tonga mpikambana amin'ny fikambanana lehibe indrindra amin'ny mpandoko sy ny tanana mahafatifaty tanana.
Tongasoa eto amin'ny World Nail Association, ny fikambanana matihanina ho an'ny mpamorona fantsika.
Ny World Nail Association, niorina tamin'ny 2005, dia nandresy ny tsena tamin'ny halatra goavana.
Ny WNA dia vondrona voalohany mahaliana amin'ny fikarakarana ny tanana sy ny fantsika rehetra.
The World Nail Association dia ny fikambanan'ny tombotsoan'ny mpanao sary hoso-doko, izay manolo-tena amin'ny fiarovana, hampiroborobo ary hahafantatra ny sary matihanina.
für bebe kokoa ny fanabeazana
Miara-miasa amin'ny Akademia Nail Eropeana, ny mpanaingo ny fantsika dia miomana amin'ny tombony vaovao sy ny ho avy miompana amin'ny asany ho ampahany amin'ireo fampiofanana tena mendrika sy niorina tsara avy amin'ireo mpampiofana efa nekena. Fiofanana fanampiny sy ny fampiroboroboana ny mombamomba ny asa rehetra dia miantoka ny kalitao avo lenta ho an'ny mpanjifan'ny salons fantsika.
Miara-miasa amin'ny fikambanana Nail Eropeana sy ny Fikambanana Iraisam-pirenena Nail, ny Fikambanana Iraisam-pirenena Nail dia mifantoka manokana amin'ny fikambanan'ny tompon-daka eran-tany sy nasionaly, indrindra ny hetsika lehibe indrindra amin'ny indostrian'ny fantsika manontolo, ny TONTOLO IZAO AN-TOKONY NAIL, izay anisan'ireo zavatra hafa dia fifaninanana ara-drariny sy fihavanana. ny mpifaninana ary ny fanajana ny fanatanterahana ny mpanao volo tsirairay dia mahita azy io ho adidy.
Tafiditra ao koa ny fanofanana sy ny fampiroboroboana ireo mpitsara izay nofana araka ny fitsipiky ny fanomban-kevitra iraisam-pirenena ary koa miasa ho an'ny tombontsoan'ny mpanaingo fantsika, ary koa ny famolavolana torolàlana fifaninanana marobe isaky ny ahafahana mamaritra mazava ireo mpandresy.
Ny fiarovana ny mpanaingo ny fantsika amin'ny fifaninanana tsy ara-drariny, ny fampiofanana tsy matihanina, ny orinasa mpivarotra dubious ary ny vokatra tsy nahazo alalana dia sehatra iray tena lehibe tokoa.
Ny fiarovana ny salon-fantsika sy ny mpanjifany dia tsy tokony hampandefitra amin'ny toe-javatra rehetra, indrindra amin'ny fotoantsika mampitombo ny isan'ny fihenam-bidy eo an-tsena. Ny fampiharana ny Regulle Kosmetika Eropeana amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo manampahefana tompon'andraikitra dia tena ilaina.
Ianao ve mazoto member
Tonga mpikambana ao amin'ny fikambanana lehibe indrindra eran-tany amin'ny endrika mpanao asa tanana!
Rehefa manomboka orinasa,
Olana amin'ny marketing sy ny fitantanana.
Nihena ny fidirana ho an'ny isan-karazany
foara fivarotana voafantina!
MAIMAIMPOANA: fihaonambem-barotra amin'ny toeram-piofanana isan-karazany.
Fanamarinana WNA & sticker am-baravarana maimaimpoana
ho an'ny studio-nao.
Ny saran'ny maha-mpikambana dia € 9,50 isam-bolana ihany!
Taorian'ny fisoratana anarana mahomby Aorian'ny fisoratana anarana dia andefasanao anao ny angona fidirana ao amin'ny vavahadin-tsoratry ny fanasokajy.
Fomba fisoratana anarana [Alemana]
Das sind Ny tombontsoanao
Ny tombony amin'ny maha-mpikambana anao ny fikambanana lehibe indrindra ho an'ny mpanao asa tanana sy ny tanana.
Fanasokajiana salona fantsika
Fiomanana ho fanamarinana
Fahazoana diplaoma mankany amin'ny fantsika manerantany
Ireo mpikambana ao amin'ny Fikambanan'ny Nail World dia manana alalana
handray anjara amin'ny Tompondaka Eran-tany tsy misy sarany fisoratana anarana.
Ireo mpitsara dia voaofana amin'ny ambaratonga farany, araka ny fenitra iraisam-pirenena sy ny tahan'ny volamena
Porofon'ny orinasa sy andrim-panatanjahantena, fanao, fandrika, hosoka ary fanitsakitsahana ny UWG
Ny fisoloana tena ny fahitana sy ny birao mpanoro hevitra
Seminera & atrikasa
Torohevitra amin'ny fanontaniana rehetra momba ny seminera sy atrikasa manokana
Mpiasa manam-pahaizana sy mahafeno fepetra izay hiahy ny ahiahinao
Fiomanana amin'ny fifaninanana
Ireo mpifaninana dia voaofana amin'ny ambaratonga farany, araka ny fenitra iraisam-pirenena sy ny tahan'ny volamena
Ampandrenesina hatrany ny fifaninanana nasionaly sy iraisam-pirenena manerantany
Ny fandefasana mailaka sy fampahalalana tsy tapaka momba ny lisitr'ireo laharana faha-25 manerantany
Sponsorship ny mpifaninana
Ireo mpandray anjara mendrika dia notohanana tamin'ny fifaninanana Nailpro Competition Cup toy ny Sacramento, ISSE Long Beach, IBS Las Vegas ary Premiere Orlando
Hanavao ny salon amin'ny alàlan'ny fanasokajiana sy hanomezana kalitao ny WNA
Fanampiana amin'ny fanombohana
Ny ekipa mahay dia mahafaly amin'ny fanontaniana rehetra
Ianao ve mazoto mahomby
Miaraka amin'ny WNA ho fanohanan'ny mpamorona fantsika mahasoa.
Fantatsika ho azy!
Misoratra anarana ary Ampiasao ny tombontsoa!
Misintona ny fisoratana anarana PDF
Filoha Ina Maria Schmid
CEO CEO KoR Dipl.-BW Ina Maria Schmid MBA
Misy toro-hevitra ho an'ny tena manokana.
Ny fanontanianao dia ho voavaly am-pifaliana na an-telefaonina.
WNA - Fikambanan'ny Nail manerantany
Raha te hahafantatra bebe kokoa.
Mpiara miasa izay manome tari-dalana amin'ny fanontaniana rehetra.
Traikefa sy fahaiza-manao.
Satria tsy mila miresaka momba ny fampisehoana fotsiny ianao, dia mila miaina izany!
Tsara ny mahafantatra hoe aiza ho aiza ny fahombiazanao rehetra
Fotoana bebe kokoa - tsy misy fotoana.
Ny harato azo antoka ho an'ny saloninao.
Antony marobe tsara amin'ny maha-mpikambana ny ENA. Tsara ny mahafantatra izay tianao.
ENA - Fikambanana Nail an'ny Eropeana
Ny mailaka nataonay
2021 Zo rehetra voatokana. - Natsangan'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Nail